Archive du 20171028
Ady amin’ny pesta eto Antananarivo Miditra an-tsehatra ny minisiteran’ny mponina
Ankorondrano andrefana, Anosibe, Ambohipo, Mandrangobato no nisantaran’ny minisiteran’ny mponina asa fanadiovana tamin’ny alalan’ny asa tanamaro nanomboka ny alakamisy teo ary hifarana anio sabotsy.
Lalàmpanorenana sy lalam-pifidianana Mampiahiahy, hoy ny TIM, MAPAR, PLD, DFP,…
Nivory teny amin’ny Hotel Colbert omaly ireo mpanao politika, ho tohin’ny fivoriana efa natrehan’izy ireo afak’omaly teny amin’ny Hotel Carlton Ampefiloha.
Fanonganana ny governemanta 51 ny sonia voaangona eny Tsimbazaza
Heno teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza omaly zoma 27 oktobra tamin’ny fiandohan’ny tolakandro fa niampy 17 indray ny sonian’ireo depiote voaangona hangataka ny « Motion de Censure » na fitsipaham-pitokisana ny governemanta
Antenimierandoholona Mikorontana ambony ambany
Mikorontana ambony ambany ao amin’ny antenimierandoholona. Ao anatin’ny fivoriana ara-potoana faharoa ity andrim-panjakana ity ankehitriny,
Zakan’i Jeanne amin’ny sangany !
Aoka marina ry Jean a ! Fa dia inona loatra r’ise no fandemen-tsaina nahazo anareo tany no dia vitan’i Jeanne Katsetsoka mihitsy no mitarika anareo amin’ny sanganareo hanakorontana tahaka ireny ?
Taxi - FTAR Ampiesonin’i Clémence R
Nanatanteraka fitokonana fanindroany omaly ireo mpikambana ao amin’ny FTAR (Fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra) tarihin-dRaharinirina Clemence.
Mpitondra fivavahana manenjika pasitera Mpisolovava ny devoly, hoy i Mailhol
Sarotra ny fiainana ka tsy manome tsiny ireo izay manenjika ahy aho, hoy ny pasitera Mailhol na André Christian Dieu Donné. Tsy ampy ny ampahafolon-karena ka raha manaratsy ny pasitera Mailhol no ahazoam-bola dia izay izany no atao.
Radio Vaovao Mahasoa 106.8 FM Hankalaza ny faha-20 taonany anio
Hankalazaina anio sabotsy 28 oktobra ny faha-20 taona niorenan’ny Radio Vaovao Mahasoa (RVM) 106.8 FM, onjam-peo ara-pilazantsara, naorin’ny Mpanompovavin’Andriamanitra Marthe Hervé.
Volavolan-dalàna momba ny fananantany Loza ho an’ny vahoaka
Nivondrona tetsy amin’ny Arrupe Faravohitra omaly ireo fiarahamonim-pirenena mba hanao fanairana mikasika ny tsy fetezan’ny volavolan-dalàna vaovao mikasika ny fanoratana sy fanaovana titra ny fananan-tany.
Fiahiana ara-tsosialy Tonga ifotony tany Tanambe ny CNaPS
Na dia lavitra sy saro-dalana aza i Tanambe dia tsy nanakana ny CNaPS ho tonga tany an-toerana izany.
Fivarotana ny Villa Elisabeth Niala bala ny praiminisitra
Marina ve tompoko fa namidin’ny fanjakana ny trano fonenan’ny filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert ?
Barea Hikatroka amin’i Comores Navoakan’ny mpanazatra Dupuis ny anaran’ireo mpilalao
Navoakan’ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny anaran’ireo mpilalao nantsoiny hiatrika ny fihaonana ara-pirahalahiana hifanandrinana amin’ny ekipam-pirenena Kaomoriana any Frantsa ny alatsinainy 11 novambra 2017 ho avy izao.
Baket 3 x 3 Malagasy Hanainga anio sabotsy ho any Togo
Anio sabotsy 28 oktobra 2017 tolakandro no hiala eto an-tanindrazana hihazo an’i Lomé Togo toerana hiatrehan’izy ireo ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Afrika andiany voalohany eo amin’ny taranja basket 3 x 3 na ny Fiba 3 x 3
Tsy misy isalasalana fa dia izay no azo ilazana azy. Sahy mamahan-dalitra vahoaka an-kitsirano ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny fihetsiny tamin’ity herinandro ity no lazaina.
Lalana Tsarasaotra- Ivato Potika sahady
Potika sahady ilay lalam-baovao eny Tsarasaotra Ivato izay vao avy nandraisana ireo vahiny tonga teto amintsika nandritra ny fihaonambe an-tampony ho an’ireo tany miteny frantsay manontolo na amin’ny ampahany farany teo.
« Salon de la santé, du bien-être et de la remise en forme » Mandray anjara mavitrika ny CNaPS
Nanomboka omaly, tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely, ny hetsika momba ny fahasalamana sy ny fahazoana aina na « salon de la sante, du bien-être et de la remise en forme», andiany faharoa.
Aretina pesta Efa nihena ireo olona voany, hoy ny DVSSE
Mihena hatrany ny isan’ireo olona lasibatry ny aretina pesta eto amintsika. Toerana maromaro, tato anatin’ny herinandro izao, no tafiditra tao anatin’ilay antsoina hoe :
Famoronana « logiciel » eto Madagasikara Mbola olana ny ho enti-manana
Na dia mitombo isa hatrany aza ireo tanora malagasy manampahaizana eo amin’ny sehatry ny informatika mirona amin’ny famoronana ireny karazana rindram-baiko ( logiciel)